Ny mpampindram-bola tsy fantatra dia manolo-tena amin'ny fiaramanidina Airbus A80neo miisa 320
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Ny mpampindram-bola tsy fantatra dia manolo-tena amin'ny fiaramanidina Airbus A80neo miisa 320
Jolay 16, 2018
Ny fifidianan'ny motera dia hatao amin'ny daty manaraka.
Ny fianakavian Airbus A320neo (neo ho an'ny safidy maotera vaovao) dia fampandrosoana ny fiankohonana A320 misy zotram-piaramanidina tery novokarin'i Airbus, ny fianakaviana voalohany dia nantsoina hoe A320ceo, ho an'ny safidy motera ankehitriny. Nalefa tamin'ny 1 Desambra 2010, nanao ny sidina voalohany tamin'ny 25 septambra 2014 izy ary nampahafantarin'i Lufthansa ny 25 Janoary 2016. Nafangaro niaraka tamin'ny motera CFM International LEAP-1A na Pratt & Whitney PW1000G ary misy antsantsa lehibe dia tokony ho 15 izany % mahomby solika kokoa. Ny karazany telo dia mifototra amin'ny A319, A320 ary A321 teo aloha. Airbus dia nahazo baiko 6,031 tamin'ny martsa 2018 ary nandefa 318 tamin'ny Mey 2018.